«Alerte rouge» any Sava, Analanjirofo… : hamakivaky an’Antananarivo i Enawo rahampitso | NewsMada
«Alerte rouge» any Sava, Analanjirofo… : hamakivaky an’Antananarivo i Enawo rahampitso
Rivodoza matanjaka i Enawo raha ny filazan’ny Météo Malagasy. Handravarava izy satria mahery vaika ny rivotra entiny. Mitondra rivotra 170 km isan’ora sy tafiotra mahatratra 240 km isan’ora manodidina ny ivony. Omaly hariva, tany amin’ny 300 km avaratra atsinanan’Antalaha no nisy ny foibeny.
Mikisaka mianandrefana izy io ary manatona an’Antalaha amin’ny hafainganam-pandeha 10 km isan’ora.
Hiditra an-tanety, anio, eo anelanelan’Antalaha sy Cap Masoala ity rivodoza Enawo ity. Hamakivaky an’Antananarivo izy rahampitso sy afakampitso ka mila miomana amin’izany ny rehetra indrindra amin’ny mety ho fanararaotan’ireo mpivarotra amin’ny fanitrihana entana sy fampiakarana vidin’entana indray. Anisan’izany ny arina fandrehitra, vary, labozia, paty, siramamy, sira, rano fisotro madio…
Noho izany, mampihatra ny fepetra mikasika ny filazana loza manambana ny faritra Diana, Sofia, Sava, Analanjirofo, Alaotra Mangoro ary Atsinanana.
Filazana fanairana ho an’ny faritra Boeny, Betsiboka, Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra ary Amoron’i Mania.
Efa nanomboka omaly, ny orambe entin’ny rambon’i Enawo any Sava sy Analanjirofo, ary ny faritra atsinanana. Hahery vaika ny onjan-dranomasina ka tsy tokony handriaka intsony ny ireo mpampiasa ranomasina rehetra.
Manangona izay ilaina rehetra ny mponina ao Antalaha
Hatry ny omaly, efa misahotakotaka sy mitebiteby amin’ny mety hafitsok’ilay rivodoza Enawo ny mponina ao amin’ny distrikan’Antalaha. Manangona labozia sy kojakoja ilaina andavanandro ny rehetra. Ny sasany, manamafy ny tafon-trano, manapaka ny hazo mety hampidi-doza…
Tsy mitsahatra mampivory ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny ny lehiben’ny distrika handraisana ny fepetra rehetra hifehezana ny mponina manolana ny fihavian’ilay rivodoza.
Efa nampodiana ny mpianatra omaly ary nafarana tsy hivoaboaka ny trano.
Nampiakarina amin’ny toerana azo antoka ny mponina mipetraka amin’ny faritra iva.
Tao Maroantsetra, nivory ny komitim-paritry ny BNGRC nametraka ny lamina rehetra. Efa miatrana ny lakana hampiasaina sy iasana. Efa voaomana ny trano hialofana ho an’ireo mety ho traboina. Nojerena ihany koa ny tahirin’entana eny amin’ny mpamongady. Tsy mitsahatra ny antsoantso fanentanana ny olona ho mailo.